बार्सिलोना जाने भूत चढेपछि नेयमार "घरको न घाटको" हुने अवस्थामा !
काठमाडौँ – अहिले यूरोप क्लब फुटबल जगतमा सबै भन्दा धेरै चर्चा नेयामारकै छ । ट्रान्सफर विन्डो बन्द भैसकेपनि नेयमारको चर्चा भने सेलाएको छैन।
ट्रान्सफर विन्डो बन्द हुनु अगाडी नेयमार बार्सिलोना जाने ठूलै हल्ला चल्यो। यति सम्मकी, नेयमार बार्सिलोना जाने लगभग पक्का भैसकेको र बार्सिलोना-पीएसजी बीच सहमति भैसकेको जस्ता समाचार पनि आए। तर अन्ततः नेयमारलाई पुनः क्लबमा ल्याउन बार्सिलोना असफल भयो।
हुन त बार्सिलोनाले नेयमारलाई फर्काउन हर-सम्भव प्रयास पनि गरेकै हो। टोलिमा नयाँ खेलाडी एन्टोनी ग्रीजम्यान हुँदा-हुँदा पनि अन्य खेलाडीलाई पीएसजी पठाएर नेयमार ल्याउने समेत बार्सिलोनाले प्रयास गर्यो।
बार्सिलोनाले आफ्ना सात खेलाडी मध्ये कसैलाई पिएसजी पठाएर भए पनि नेयमारलाई भित्राउन चाहन्थ्यो । टोलीका सुपर स्टार लियोनल मेस्सीको इच्छा कारण पनि बार्सिलोनाले ब्राजिलियन स्टारलाई ल्याउन अन्तिम सम्म पनि प्रयास गरेको बताउने गरिन्छ।
नेयमारले समेत बार्सिलोना फर्किने मरिहत्ते नै गरेका थिए। उनले बार्सिलोना फर्किने बारे सार्वजनिक रुपमै पटक-पटक इच्छा जाहेर गरेका थिए। नेयमारकै कारण मेस्सीले क्लबलाई दबाव समेत दिएको समाचारहरु आएका छन्।
सामुइल उम्टिटी, इभान राकटिक, उम्समान डेम्बेले, आर्थर मेलो, जियान क्लाउड टोडिबो, निल्सन सेमेडो र फिलिप्पे काउटिन्हो मध्ये कुनै पनि खेलाडीलाई पठाएर भएपनि बार्सिलोना नेयमारलाई फिर्ता ल्याउन चाहन्थ्यो।
काउटिन्हो यही बीचमा एक सिजनका लागि बायर्न म्युनिख पुगेसँगै पिएसजीले अन्य खेलाडी लिने खासै चाहना देखाएन। फलस्वरूप नेयमार पिएसजीमै थन्किन बाध्य भए।
अब उनले कम्तीमा जनवरी सम्मको सरुवा बजारसम्म धर्यता राख्नु पर्नेछ । त्यस समय सम्म नेयमार पिएसजीमै रहेर खेल्नु पर्ने हुन्छ। तर बार्सिलोना फर्किने तिब्र चाहनाको कारण नेयमारले पिएसजीमा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नयाँ सिजानमा पिएसजीले नेयमारलाई कुनै पनि खेलमा उतारेको छैन। सार्वजनिक रुपमा पिएसजी छाड्न तयार रहेको बताउँदै आएका नेयमारलाई अन्यत्र पठाउने पिएसजीले पनि चाहना राखेकै हो।
नेयमारले पछिल्लो समय देखाइरहेको व्यवहार देखि पिएसजी समर्थक समेत उनीसँग रुष्ट छन्। पिएसजीबाट खेलेको जुनै पनि खेलमा पिएसजीकै समर्थकहरुले नेयमार विरुद्ध नारा लगाउने पनि पक्का छ।
खेल विश्लेषकहरुका अनुसार बार्सिलोना समर्थक पनि नेयमारलाई मन पराउँदैनन्। बार्सिलोना जाने तिब्र चाहनाका कारण उनले देखाएको व्यवहारको कारण नेयमारनै “घरको न घाट” बन्न पुगेको पनि विशेषण गर्न थालिएको छ।
प्रकाशित : बुधबार, भदौ २५, २०७६०९:२३
सन्दीपको बार्बाडोस सेन्ट किट्ससँग भिड्दै ! टिममा पर्ने सन्दिपको सम्भावना कति ?